One In Three Women Who Ever Had A Baby Wet Themselves in Burmese | Continence Foundation of Australia
One In Three Women Who Ever Had A Baby Wet Themselves in Burmese
ကလေးမွေးဖူးသော အမျိုးသမီး သုံးဦးလျှင် တစ်ဦးသည် ဆီးမထိန်းနိုင်ဘဲ ထွက်ကျကြသည်
Women who have even just one baby are nearly three times more likely to leak urine and wet themselves, than women who have not hadababy. The more babies you have, the more chance you will leak urine and wet yourself.
ကလေး မမွေးဖူးသော အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် ကလေးတစ်သီးသာ မွေးခဲ့သော အမျိုးသမီးများ၌ ဆီးထွက်ကျပြီး စိုရွှဲကုန်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ သုံးဆနီးပါး ပိုများပါသည်။ သင် ကလေး ပိုမွေးလေ၊ သင့်ထံ၌ ဆီးထွက်ကျပြီး စိုရွှဲကုန်သော ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလေဖြစ်ပါသည်။
The baby stretches the nerves and pelvic floor muscles that keep the bladder shut as it moves through the birth canal. It is rare for the bladder itself to be damaged during birth but the muscles and nerves are often over stretched. The muscles can sometimes be left weak and cannot keep all the urine in the bladder. The bladder then leaks. Leaking happens mostly when you cough, sneeze, lift or do exercise. You may feelastrong urge to empty your bladder. You may also have trouble holding on. You need to do pelvic floor muscle training to help the muscles get strong again.
ကလေးမွေးပြီးနောက် အဘယ်ကြောင့် ဆီးထွက်ကျရသနည်း။
ကလေးသည် မွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရွေ့လျောသွားသည်နှင့်အမျှ၊ ဆီးအိမ်ကို စေ့ထားပေးသော အာရုံကြောများနှင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို ကျယ်သွားစေပါသည်။ ကလေးမွေးနေခိုက် ဆီးအိမ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှာ ရှားပါးသော်လည်း ကြွက်သားများနှင့် အာရုံကြောများသည် အများအားဖြင့် ကျယ်သွားတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကြွက်သားများကို အားနည်း ကျန်ရစ်စေပြီး ဆီးအိမ်ထဲ၌ ဆီးရည်အားလုံးကို သိမ်းမထားနိုင်တော့ပါ။ ထိုအခါ ဆီးအိမ်မှ ဆီးယိုထွက်ပါတော့သည်။ သင် ချောင်းဆိုးလျှင်၊ နှာချေလျှင်၊ ပင့်မလျှင် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင် ယိုထွက်ခြင်း အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆီးသွားလိုလွန်းသော စိတ်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်။ သင် ဆီးအောင့်ထားရန်လည်း ခက်ခဲနိုင်လိမ့်မည်။ သင့် ကြွက်သားများ ပြန်လည် အားကောင်းလာရန် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Leaking will not go away if you just ignore it. Train your pelvic floor muscles to help get their strength back. Then the leaking is likely to stop. You may start wetting yourself if you do not get your pelvic floor muscle strength back after each baby. This gets even worse as the pelvic floor muscles get weaker with age.
ဆီးထွက်ကျမှုသည် သူ့ဘာသာသူ ပျောက်သွားလိမ့်မည်လား။
အကယ်၍ သင် ဂရုမစိုက်ဘဲ နေခဲ့လျှင် ဆီးထွက်ကျမှု ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြွက်သားများ ပြန်လည် အားကောင်းလာရန် သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။ သို့မှသာ ဆီးထွက်ကျမှု ရပ်တန့်သွားဖွယ်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင် ကလေးတစ်ကြိမ်မွေးပြီးတိုင်း သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ ပြန်လည် အားကောင်းလာရန် မလုပ်ပေးလျှင် သင့်၌ ဆီးထွက်ကျမှု စတင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးလာသဖြင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ ပိုမို အားလျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤအခြေအနေမှာ ပိုဆိုးလာပါလိမ့်မည်။
The bladder isahollow muscle pump. It fills slowly with urine from the kidneys. The urethra (urine tube) is kept closed byaring of muscle calledasphincter. When the bladder holds 300-400 mls of urine, you get the urge to pass urine. When you sit on the toilet, the sphincter and pelvic floor muscles relax. Then the bladder squeezes the urine out. After this, the same ‘fill and empty’ cycle begins again.
ကျွန်ုပ်၏ ဆီးအိမ် မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။
ဆီးအိမ်သည် ခေါင်းပွ ကြွက်သား အရည်စုပ်စက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ထဲမှ ဆီးရည်များသည် ဆီးအိမ်ထဲ၌ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်လာပါသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်း (ဆီးပြွန်)ကို ညှစ်ကြွက်သားဟုခေါ်သော ကြွက်သားကွင်းတစ်ခုက ညှပ်ပိတ်ပေးထားပါသည်။ ဆီးအိမ်သည် ၃၀၀ မှ ၄၀၀ မီလီလီတာ ရှိသော ဆီးရည်ကို သိမ်းထားပြီဆိုလျှင်၊ သင် ဆီးသွားချင်စိတ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သင် အိမ်သာအိုးအပေါ် ထိုင်လိုက်သောအခါ၌၊ ညှစ်ကြွက်သားနှင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ ဖြေဖျော့လာကြပါသည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဆီးအိမ်သည် ဆီးရည်ကို ညှစ်ထုတ်ပစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စပြီးသွားလျှင် (ဖြည့်ခြင်းနှင့် သွန်ခြင်း) သံသရာသည် ဤပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်စတင်ပါသည်။
Look at the picture of the pelvic floor. The pelvic floor muscles:
help to hold the bladder, the uterus (womb) and bowel (colon) in their proper place.
ကျွန်ုပ်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ မည်သည့်အလုပ်များကို လုပ်ပေးသနည်း။
တင်ပါးဆုံခွက်၏ ပုံကိုကြည့်ပါ။ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများသည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ပေးပါသည်။
သာအိမ်လမ်းကြောင်းနှင့် စအိုဝ (နောက်ဖက်အပေါက်လမ်းကြောင်း) ပတ်လည်ကို ညှစ်ပေးပါသည်။
ဆီးအိမ်၊ သားအိမ်နှင့် အူသိမ် (အူမ) တို့ကို သူတို့၏ ပုံမှန်နေရာမှာနေနေရန် ကူညီထိန်းပေးပါသည်။
Any of the following things might happen. You might:
often feelastrong and urgent need to empty your bladder or bowel.
not have good support for your bladder, your uterus or your bowel.
ကျွန်ုပ်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများသည် ကလေးမွေးပြီးနောက် အားနည်းနေလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း။
အောက်ပါကိစ္စများအနက် မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ သင့်၌ ဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်များမှာ၊
သင် ချောင်းဆိုးလျှင်၊ နှာချေလျှင်၊ ပင့်မလျှင်၊ ရယ်မောလျှင် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သောအခါ ဆီးထွက်ကျမည်။
လေမလည်အောင် ချုပ်ထိန်းထားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဆီး သို့မဟုတ် ဝမ်းသွားရန် ပြင်းပြပြီး အရေးတကြီးသွားလိုစိတ် မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။
သင့် ဆီးအိမ်၊ သားအိမ် သို့မဟုတ် ဝမ်းကို ထိန်းခံပေးနိုင်အား ကောင်းမည် မဟုတ်ပါ။
ထိန်းခံပေးနိုင်အား မကောင်းလျှင်၊ သင့် တင်ပါးဆုံ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်မက သင့် သားအိမ်လမ်းကြောင်းထဲသို့ ညွတ်ကျလာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ၎င်းကို တင်ပါးဆုံ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လျှောကျမှုဟုခေါ်ပါသည်။ လျှောကျမှုသည် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သြစတြေးလျားနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး ၁၀ ဦး အနက် ၁ ဦးခန့်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် သားအိမ်လမ်းကြောင်းထဲတွင် တစ်ခုခု လေးလံနေသည်၊ သို့မဟုတ် စူထွက်နေသည် သို့မဟုတ် တရွတ်တိုက်ဆွဲနေသည်ဟု ခံစားရပါမည်။ အကယ်၍ ဤရောဂါလက္ခဏာများ ဒုက္ခပေးနေလျှင် အမျိုးသမီး ၅ ဦး အနက် ၁ ဦးသည် သူတို့သက်တမ်းတစ်လျှောက်၌ ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
- eat2pieces of fruit and5serves of vegetables daily.
- do not go to the toilet ‘just in case’. This might reduce how much you hold in your bladder.
- make sure your bladder is empty after going to the toilet.
protect your pelvic floor muscles when opening your bowels. A good way to sit on the toilet is to put your forearms on your thighs. Then put your feet close to the toilet. Relax your pelvic floor muscles and gently push.
For more information see the brochures: ‘Pelvic Floor Muscle Training for Women’, ‘Overactive Bladder and Urgency’ and ‘Good Bladder Habits for Everyone’.
ဤအရာများ မဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့ တားဆီးနိုင်သနည်း?
သင်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ပေးပါ (နည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ နောက်မှ ပြောပြပါမည်)
ဆီးနှင့် ဝမ်းသွားရာ၌ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို လုပ်နေပါ
- နေ့စဉ် သစ်သီး ၂လုံးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၅ ပုံ စားပါ။
- လိုရမယ်ရ အဖြစ် အိမ်သာ မတက်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် သင့်ဆီးအိမ်ထဲ၌ ဆီး ပမာဏ ထိန်းထားနိုင်မှုကို လျော့နည်းသွားစေနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
- အိမ်သာတက်ပြီးနောက် ဆီးကုန်ခမ်းသွားရန် သေချာပါစေ။
ဝမ်းသွားသောအခါတွင် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ အိမ်သာအပေါ် ထိုင်သောနည်းကောင်းတစ်ခုမှာ သင့်ပေါင်အပေါ်၌ လက်ဖျံများကို တင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် သင့်ခြေထောက်များကို အိမ်သာခြေရင်းအနား ကပ်ထားပါ။ သင်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို ဖြေဖျော့လိုက်ပြီး ညင်သာစွာ ညှစ်ပါ။
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် (အမျိုးသမီးများအတွက် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းများ)၊ (အလုပ်လုပ်နေလွန်းသော ဆီးအိမ်နှင့် အရေးတကြီးဖြစ်မှု) နှင့် (လူတိုင်းအတွက် ဆီးအိမ်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ) စာစောင်များတွင် ကြည့်ပါ။
The birth ofababy might have stretched your pelvic floor muscles. Any ‘pushing down’ actions the first weeks after the birth might stretch the pelvic floor muscles again. Avoid pushing down on your pelvic floor muscles. This will protect them.
Do not strain when using your bowels.
ကျွန်ုပ်၏ အားနည်းနေသော တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို မည်ကဲ့သို့ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမည်နည်း။
ကလေးမွေးသည့်အတွက် သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ ဆန့်ကျယ်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ မီးဖွားပြီးနောက် ပထမအပတ်များ၌ အောက်သို့ ဖိချသော မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဆို တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို ထပ်မံ ဆန့်ကျယ်သွားစေနိုင်ပါသည်။ သင်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ အပေါ် ဖိချမှု မရှိရန် ရှောင်ရှားပါ။ ၎င်းသည် ကြွက်သားများကို ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မည်။
သင် နှာမချေမီ၊ ချောင်းမဆိုးမီ၊ နှာမညှစ်မီ၊ သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုခုကို မ,မမီ်၊ သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို ညှစ်၍၊ ပင့်တင်ပြီး တောင့်ထားရန် ကြိုးစားပါ။
သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး အားပိုရှိလာရန်လုပ်ပါ။
If you do not feeladistinct ‘squeeze and lift’ of your pelvic floor muscles when you try to squeeze, ask for help from your continence physiotherapist or continence nurse advisor. They will help you to get your pelvic floor muscles working the right way.
ကျွန်ုပ်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။
အကယ်၍ သင် ညှစ်ရန် ကြိုးစားသောအခါ သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို သိသိသာသာကြီး ညှစ်ပြီး မပင့်တင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရလျှင်၊ ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရှင် (ဖီဆီယို) သို့မဟုတ် ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ သူနာပြု အကြံပေးဆီမှာ အကူအညီတောင်းပါ။ သူတို့က သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ နည်းလမ်းကျကျ အလုပ်လုပ်လာရန် သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
Now that you can feel the pelvic floor muscles working, you can:
Repeat this squeeze and lift as many times as you can. Try to aim for between 8 and 12 squeezes.
Do your whole training program each day. Try sets while lying down, sitting or standing.
ဤသို့ ညှစ်ခြင်းနှင့် ပင့်တင်ခြင်းတို့ကို သင်တတ်နိုင်သမျှ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပါ။ တတွဲစီ၌ ၈ ကြိမ် မှ ၁၂ ကြိမ်အထိ လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါ။
၈ ကြိမ်မှ ၁၂ ကြိမ်အထိလုပ်လျှင် တစ်တွဲဟူသော သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ၊ အတွဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား၌ အနားယူပြီး သုံးတွဲ လုပ်ရန် ကြိုးစားပါ။ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၌ ၈ ကြိမ် မှ ၁၂ ကြိမ်အထိလုပ်ရသော အတွဲ သုံးတွဲဖြစ်ပါသည်။
(အထာ) ကို သုံးပါ။ ၎င်းသည် သင် ချောင်းမဆိုးမီ်၊ နှာမချေမီ် သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုခုကို မ,မမီ်၊ အခါတိုင်း၌ သင်၏ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို ညှစ်ပြီး တောင့်ထားခြင်းအားဖြင့် တောင့်ခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Seek help if you do not seeachange in symptoms after3months.
အားပြင်းပြီး အကြိမ်နည်းပါးသော ညှစ်ခြင်းများသည် စိတ်မပါ တပါလုပ်သော ညှစ်ခြင်းများကို များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းထက် ပိုကောင်းပါသည်။ အကယ်၍ သင် နည်းလမ်းကျကျ ညှစ်နေမှန်း မသေချာလျှင်၊ သင်၏ ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရှင် (ဖီဆီယို) သို့မဟုတ် ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ သူနာပြု အကြံပေးထံမှ အကူအညီတောင်းပါ။
Once you have learnt how to do pelvic floor muscle squeezes, do them often. Every day is best. Give each set of squeezes your full focus. Makearegular time to do your pelvic floor muscle squeezes. This might be when you:
It’sagood idea to get into the lifelong habit of doing pelvic floor muscle exercises.
do one set every time you go to the toilet.
each time after you pass urine or open your bowels.
always brace your pelvic floor muscles before you cough, sneeze or lift. This is called having ‘the knack’.
တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ ညှစ်နည်းကို တတ်မြောက်သွားပြီးနောက် မကြာခဏလုပ်ပါ။ နေ့စဉ်လုပ်ခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးသာဖြစ်ပါသည်။ ညှစ်သော လေ့ကျင့်ခန်း တစ်တွဲစီကို သင် လုံးဝအာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်ကို ပုံမှန် သတ်မှတ်ထားပါ။ ၎င်းကို သင် အောက်ပါအချိန်အခါများ၌ လုပ်နိုင်ပါသည်။
တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်သက်တာလုံးအတွက် လုပ်သွားမည့် အလေ့အကျင့်ဖြစ်သွားရန် လုပ်လျှင် အလွန်ကောင်းပါသည်။
သင် အိမ်သာတက်သည့်အခါတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းတစ်တွဲလုပ်ပါ။
ဆီး၊ ဝမ်း သွားပြီးသည့်အခါတိုင်း လုပ်ပါ။
သင် ချောင်းမဆိုးမီ်၊ နှာမချေမီ် သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုခုကို မ,မမီ်၊ သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို တောင့်ခံထားပါ။ ၎င်းကို (အထာ) သုံးခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။
If things do not get any better after6months seek help
Speak to your doctor if any of the following problems are not getting better:
the need to rush to get to the toilet to pass urine.
the need to rush to the toilet to open your bowels.
not being able to hold on when you want to.
not being able to control passing wind.
Pelvic floor muscle damage may take up to six months to get better. You should speak to your doctor, continence physiotherapist or continence nurse advisor if things are not any better after six months.
အကယ်၍ ၆ လ ကြာပြီးနောက် အခြေအနေများ မတိုးတက်လာလျှင် အကူအညီတောင်းပါ
အောက်ပါ မည်သည့်ပြဿနာမဆို တိုးတက်လာသည်ကို မတွေ့ရလျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဆီးသွားရန် အိမ်သာကို အပြေးအလွှားသွားရန် လိုအပ်ခြင်း
ဝမ်းသွားရန် အိမ်သာကို အပြေးအလွှားသွားရန် လိုအပ်ခြင်း
မိမိ လိုအပ်သောအခါ၌ မထိန်းထားနိုင်ခြင်း
သင်ဆီးသွားသောအခါတွင် အတွင်းထဲ၌ လောင်ခြင်း သို့မဟုတ် စပ်ခြင်း
ဆီး စတင်စီးဆင်းရန် ညှစ်ရခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သား ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန် ၆ လအထိ ကြာမြင့်ကောင်း ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ ၆ လကြာပြီးနောက် အခြေအနေများ တိုးတက်လာမှု မရှိလျှင် သင်သည် သင့် ဆရာဝန်၊ ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရှင် (ဖီဆီယို) သို့မဟုတ် ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ သူနာပြု အကြံပေးနှင့် တွေ့ဆုံပါ။